Aad ayaan u faraxsanahay in English. Aad ayaan u faraxsanahay Meaning and Somali to English Translation
Home>Words that start with I>I'm happy>Aad ayaan u faraxsanahay (Somali to English translation)
What does Aad ayaan u faraxsanahay mean in English? If you want to learn Aad ayaan u faraxsanahay in English, you will find the translation here, along with other translations from Somali to English. We hope this will help you in learning languages.
Here is Aad ayaan u faraxsanahay meaning in English:
aad this duub karin ilaa ii?
Fadlan u aamuso
Halka aad jeclaan lahayd si ay u tagaan?
Waxaad tahay qofka of dhadhan wanaagsan
Waxaan qabaa inaan u baahan tahay inaad aragto dhakhtar
Waxay ahan in hadda